UMengameli wayala ukuba kumiswe umkhankaso wokuqwashisa ngeCoronavirus
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » UMengameli wayala ukuba kumiswe umkhankaso wokuqwashisa ngeCoronavirus
Mashi 28, 2020
Abakhankasi abazama ukulwa neCoronavirus bagqoka izifihla-buso namagilavu ​​futhi bashumayele ukugeza izandla ukuvimbela i-coronavirus ukuthi ingasabalali. Ukumisa imikhankaso yokuqwashisa ngama-coronavirus umyalo kaMongameli uPeter Mutharika. Ngokwakhe ngesonto eledlule umemezele i-COVID-19 njengenhlekelele yezwe lonke eMalawi, futhi amaqembu aphikisayo abelokhu engena indlu ngendlu efundisa abantu ngezimpawu nangokuzivikela.
IMalawi iyalele amaqembu ezepolitiki aphikisayo ukuthi abize le mizamo njengobupolitiki balolu bhubhane. Ngenkathi iMalawi ingakaqinisekisi ukuthi kunaleli gciwane, amaqembu aphikisayo abelokhu engena indlu ngendlu efundisa abantu ngezimpawu nangokuzivikela.
Okhulumela uhulumeni utshele i-Voice of America ukuthi umyalezo owusatshalaliswa yiqembu eliphikisayo awuzange wenziwe ngongoti bezempilo, okwenza le mizamo kube yisinyathelo sezepolitiki esingadala umonakalo omkhulu kunokuhle.
Iqembu eliphikisayo iMalawi Congress Party (MCP) ne-United Transformation Movement (UTM) bebelokhu bengena umuzi nomuzi ezindaweni zasemakhaya beqwashisa ngezimpawu nokuvikela izifo.
Njengoba i-coronavirus isakazeka i-Afrika yonkana, iMalawi isiqinise ukuhlolisisa leli gciwane kuzo zonke izindawo zokungena nasezibhedlela. Iziphathimandla zezempilo zithi bangaphezu kuka-500 abantu ababhekiwe ngenkathi bezihlukanisa bodwa ezweni lonke.
Udaba olumayelana nomkhankaso wamaqembu ezombusazwe aphikisayo omkhankaso we-coronavirus luza njengoba ikhomishini yokhetho yaseMalawi ngoMsombuluko ithe kuzophinde kubanjwe ukhetho lwangonyaka owedlule oluzoba ngoJulayi 2.
INkantolo yoMthethosisekelo ngenyanga eyedlule yaluchitha ukhetho lwangoMeyi 2019, yabe isichaza izinto ezazingahambi ngendlela efanele. Iqembu likaMengameli uMutharika lidlulisa isinqumo eNkantolo eNkulu.
iNkantolo Covid-19 Impilo Malawi
I-Airbus ihambisa izifihla-buso ezivela eChina ukuxhasa impi yase-Europe ye-COVID-19
Isikhumulo sezindiza saseSeychelles sivulekile, imingcele ivaliwe kubavakashi
Ilungele Ukusebenzela I-Cocktails Market Outlook Ikhava Entsha...
I-FDA Ikhipha Izincwadi Zesexwayiso Eziya Ezinkampanini Ngokungemthetho...
I-Club Med Ehlanganisa Konke Inikezwa kuleli hlobo
UMongameli Biden kanye nesixhumanisi esisha se-White House ...
Izithunywa zamazwe ngamazwe zibuya ngobuningi bazo...
Lapho Ikhaya likaNgqongqoshe Wezokuvakasha Olambile uBartlett...
Umbukiso weSaint Lucia eDubai Expo
Nethezeka futhi usethe kabusha: Lapho abantu baseMelika manje sebelibangise e...